Gịnị Bụ ndị kasị ama na Historical Train ụzọ gasị | Save A Train
Home > Travel Europe > Gịnị Bụ ndị kasị ama na Historical Train ụzọ gasị
The whooshing ụda nke a ụgbọ okporo ígwè na-eru n'ime a ebe, na-ekwe omume nke na-na na na-aga ebe kpamkpam na-atụghị anya. Nwere ike ị na-eche ihe ọ bụla mma karịa Famous na Historical Train ụzọ gasị?
Ụgbọ oloko na-a na-echetara nke Golden Age nke njem. Mgbe ndị mmadụ wee na-eme njem ruo ọtụtụ ọnwa a oge na inyinya na ikekwe aka. Travel bụ imejụ agụụ mmekọahụ ozugbo na naanị na-atụ anya na-aga.
No, njem pụtara ụtọ na njem. Mbukota na Kporo, na ikekwe a compass na ọtụtụ ezi map. Travel pụtara aga ebe ị maara na ọ dịghị onye, ebe ọbụna ikuku chere iju ma gị akwụkwọ ozi n'ụlọ nwere ike na-abata mgbe gị na nloghachi.
Na kpọ isi ala kasị eju afọ mode nke njem, Save A Train ewetara gị a ndepụta Famous na akụkọ ihe mere ụgbọ okporo ụzọ gasị ị ga-ewere na 2019!
London na Venice na Orient Express – The Longest Famous and Historical Train Routes
Nke a ga-kasị maa okpukpu abụọ elu dị ka a akụkọ ihe mere eme ụbọchị! This is possibly the most Famous and Historical Train Routes and a ihunanya ụgbọ okporo ụzọ na ụwa. Ọ departs si Paris na-aga Byzantine obodo nke Istanbul. Ị nwere ike site na a ọkọlọtọ tiketi site SaveATrain njem nke a ụzọ, ma ọ bụ na-ahọrọ ihe adọrọ adọrọ nhọrọ na hop na Orient Express. The aghụghọ nke a okomoko ụgbọ okporo ígwè famously n'ike mmụọ nsọ Agatha Christie. Ụbọchị ndị a na ọ bụ agaghịkwa arụmọrụ ke akpasarade ụdị ma ya spirit ndụ na Belmond si Venice-Simplon Orient Express. E nwere ihe abụọ ụgbọ oloko, n'ezie, onye na e ji ebu ihe na-akpa si 1920s na 30s na ndị ọzọ bụ a akụkọ ihe mere eme British Pullman ụgbọ okporo.
The ọhụrụ ụzọ ifufe ya ụzọ site London na Venice, na oge tinyere ndị ọzọ aga Europe, na otu ugboro-a-afọ mbụ Paris-Istanbul njem August.
Milan na tiketi Venice Train
Florence na tiketi Venice Train
Bologna na tiketi Venice Train
Rome na tiketi Venice Train
Ị kwesịrị njem n'ụgbọ okporo ígwè na ike ga-ebuga na a ugbo. Nke a bụ N'ezie, otu nke Famous na akụkọ ihe mere ụgbọ okporo ụzọ gasị ị ga-ewere na 2019!
Ya mere, ihe na-eme mgbe ị na-esi na ugbo? Luckily ụgbọ okporo ígwè njem na-enwe ike pụọ na ụgbọ okporo ígwè na-enwe mma ozugbo n'ụgbọ ugbo. Ị ga-agafe Baltic osimiri na 45 nkeji. The dum ụgbọ okporo ígwè na njem dịruru 4 awa na 45 nkeji. Copenhagen na ya na-emeghe ihu rye sandwiches na ịrịba imewe aesthetic bụ a ezi uche ụgbọ okporo ígwè tiketi n'ebe ekwo ekwo Hamburg, Germany na ị pụrụ n'ezie, zuo site anyị, ị ga-enwe a button na njedebe nke a blog post.
Glasia Express - Switzerland
Ijikọ abụọ Switzerland kasị sinik ugwu ntụrụndụ, Zermatt na St Moritz, na glasia Express bụ ihe kasị izuike ụzọ enwe pụtara mma nke Swiss Alps. Mere họọrọ nke a dị ka otu n'ime ndị kasị Famous na akụkọ ihe mere ụgbọ okporo ụzọ gasị ị ga-ewere na 2019?
Ejegharị ejegharị n'ebe ọwụwa anyanwụ si Zermatt, ụbọchị njem mkpuchite 91 tunnels na 291 àkwà mmiri dị ka ọ na-apụta gara aga n'ebe ndịda Switzerland si n'elu ugwu na ala ahịhịa juru, pristine ugwu ọdọ mmiri, na picture-zuru okè ntà. Isi nke njem na-agụnye Oberalp Pass, kasị elu mgbe na-agba ịnyịnya na 6706 ụkwụ. Ọzọ bụ ndị a ma ama Landwasser Viaduct - a ebube isii njiko Ọdịdị eguzo 200 ụkwụ na olulu n'ime a ọwara bee ogologo n'ime ugwu.
Interlaken ka Zermatt Ụgbọ oloko
Lucerne na tiketi Zermatt
West Highland Line, Glasgow ka Mallaig - Scotland
Anyị na-ugbu a na-ara ka TV usoro Outlander, nke na-elekwasị anya agadi-akwụkwọ Scotland Highlanders. N'ihi ya, e nweghị ihe ijuanya na nke a bụ na ndepụta nke Famous na Historical Train ụzọ gasị. The West Highland Line bụ ụzọ magburu onwe ya na-enwe na mba ọhịa, n'ebe ọdịda anyanwụ nke ụsọ oké osimiri. Ozugbo ụgbọ okporo ígwè doo Glasgow - Scotland nnukwu obodo - mepere emepe odida obodo ngwa ngwa ọduọde ọkụkụ glens na Omume lochs. n'isi n'akuku ugwu, ndị West Highland Line-agabiga remote wilderness nke Rannoch moo. Ọ na-ahụ na-aga na towering Ben Nevis, emetụ ala Fort William. Ịmafe direction na-akpụ akpụ, n'ebe ọdịda anyanwụ, okporo ígwè traverses na Glenfinnan Viaduct (agba na Harry Potter film usoro) tupu rutere ekwo ekwo n'ọdụ ụgbọ mmiri nke Mallaig.
Amsterdam na London Train tiketi
Lyon na tiketi ụgbọ oloko na London
Famous na Historical Train pụrụ isiwo England
Njem tren njem bụ otu nke oké British onyinye nke Victorian Age. Na narị afọ nke 20, ụgbọ okporo ígwè ịnụ ọkụ n'obi na ụgbọ okporo ígwè hobbyists yiri ka ẹyọyọhọ fọrọ nke nta ka ngwa ngwa dị ka ndị ụgbọ okporo ígwè onwe ha. Historic uzuoku ụgbọ oloko, pụrụ iche sinik njem, na warara nlele ụzọ ụgbọ okporo ígwè e weghachiri eweghachi. Ebe a, ị ga-ahụ ụfọdụ ndị kasị mma uzuoku ụgbọ okporo ígwè na-nketa ụgbọ okporo ígwè njem. Chọta ha na West Country ógbè nke Cornwall, Devon, Somerset, na Dorset.
Dị ka a otutu ndị a ụgbọ oloko na-weghachiri eweghachi uzuoku ụgbọ oloko, Save A Train adịghị egboro tiketi na ha. Otú ọ dị, anyị na-eme na-enye kacha mma price n'ihi na na si United Kingdom.
Chọrọ na-enweta Famous na akụkọ ihe mere ụgbọ okporo ụzọ gasị?
Gaba na n'elu Save A Train na akwụkwọ gị tiketi 3 nkeji.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffamous-historical-train-routes%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml na i nwere ike ịgbanwe / ru na / es ma ọ bụ / de na ndị ọzọ asụsụ.
#ama #FamousTrains #HistoricTrains europetravel longtrainjourneys TrainStation ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ Train Travel